Sidee Loogu Dhaawacmaa Heflin HCL?
1. Synephrine HCL (5985-28-4) Xaqiiqooyinka
2. Dib u eegida Synephrine
3. Maxay tahay Synephrine (5985-28-4)?
4. Mechanism of Action of Synephrine budada HCL
5. Gargaarka Caafimaadka ee Synephrine
6. Saameynaha Waxyeelada ee Saaxiibinta
7. Isticmaalka Qalabka loo Isticmaalay
8. Mowduucyada ugu muhiimsan ee doodda: Synephrine vs Caffeine
9. Bixinta Supefrine Supplement Online
10. Gabagabada ku yaala Synephrine (5985-28-4)
Synephrine HCL (5985-28-4) Xaqiiqooyinka
Synephrine (5985-28-4) waa alkaloid in badanaa loo isticmaalo si loo abuuro dheellitirka 'Synephrine HCL'. Maqaalkani waxaa ka mid ah xaqiiqooyinka loo yaqaan "Synephrine facts, History of Synephrine, Farsamada HCL ee ficilka, faa'iidooyinka caafimaadka ee synephrine, saameynaha / halista synephrine iyo synephrine ayaa lagu taliyey isticmaalka.
Isticmaalka Synephrine (Cas: 5985-28-4, oo loogu yeero Sef Synephrine, ama p-Synephrine) ayaa dib u soo noqnoqonaya sanado badan kahor waxayna dib ugu noqon kartaa dalka hooyo. Qiimaha daawada ee Synephrine ahaa oo laga helay gobolka halkaas oo markii ugu horreysay loogu daaweyn jiray xanuunada caloosha iyo mindhicirka sida lallabbada iyo calool-fadhiga. Sidoo kale, Bikradii hore ee Badani waxay adeegsadeen Synephrine sidii loo daaweyn lahaa hurdo la'aan, walaac iyo qalal.
Geedka geedka geedka ah, oo laga helay Asia iyo Mediterranean.
Waxyaabaha soo socda ayaa ah qaar ka mid ah xaqiiqooyinka caadiga ah ee qof kasta oo doonaya inuu isticmaalo Synephrine waa inuu ogaadaa midhaha kiimikada laga soo qaado (miro qorran):
Miro ayaa sidoo kale ku jira kiimiko kale oo ka mid ah eefedrine. Xaddidaadda walaxda ugu dambeeya way yar tahay.
Miro orange oo khafiif ah ayaa jirey muddo dheer waxayna adeegsigeeda ku soo noqotey jasiiradaha Aasiya halkaas oo badanaa loo isticmaalay daaweynta dhibaatooyinka caloosha. Waxaa sidoo kale aad loogu heli karaa qaybo ka mid ah Bariga Afrika.
Caadi ahaan, xayr oo qadhaadh ah ayaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo lalabo, caloosha, iyo caloosha. In Mediterranean, waxaa loo isticmaalay in lagu daweeyo mantarro, kor u qaadista miisaanka iyo hoos u dhac cunto. Saliidaha saliidda ah waxaa mararka qaar lagu daboolaa maqaarka, laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa qaabkeeda la soo saaro.
Qosolka ku hareeraysan qolka "Synephrine"
Daawada budada ah ee loo yaqaan 'powdered powder' ayaa muddo dheer ku wareeray walxo kale oo la mid ah. Jahawareerkan wuxuu ahaa mid halis ah in xitaa qaar ka mid ah joornaalada sayniska ee ay ku adagtahay in la dhiso halka ay u kala saaraan kiimikada si habboon. Qaar ka mid ah walxaha la midka ah laakiin weli ka duulaya Synephrine waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Soo saarida liinta lafaha. Tani waa ugu horreyntii ilaha laga soo xigtay Synephrine. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaan weli ogeyn in aan ka ahayn kiimikadaan, waxaa jira maaddooyin kale oo ka mid ah soo bixinta oo la mid ah Synephrine oo weli aad uga duwan marka loo eego qaababka ficilka. Sababtan awgeed, oranjada qadhaadh waxaa loo yaqaanaa xal lagu kalsoon yahay ee daaweynta cudurrada kala duwan iyo kiimikada mas'uul ka ah daaweynta cuduradani way ka duwan tahay p-Synephrine.
Phenylephrine. Kiimikadani waa qaabdhismeed aad u la mid ah Synephrine, laakiin qaababka ficilku waa siyaabo kala duwan. Inkastoo looxirin loo isticmaalo hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka iyadoo loo marayo thermogenesis, phenylephrine waxaa sida caadiga ah loo adeegsadaa nadiifiye sanka. Qalabka kiimikada kiimikada ayaa sidoo kale loo adeegsadaa hawlaha qalliinka si loogu diro ardayga indhaha inta lagu jiro qaliinka. Phenylephrine waxaa loo sameeyaa si siman. Dhinaca kale, Synephrine, waxaa laga helaa dhirta dhirta.
Efesrine. Miro orange ah oo qadhaadh ayaa sidoo kale lagu ogaadey inay hayso kaydka weyn ee Efesrini. Efedrine waa kicin aad u xoogan, oo isticmaalkeeda waa in la xakameeyo maadaama ay tahay mid xoog leh.
Dhismaha efedrine-kiciyaha ayaa la mid ah kan Synephrine, tanina waa tan ugu yareeya labadaba kiimiko. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka eefedrine waxaa laga mamnuucay meelo badan sababtoo ah dhibaatooyinka xun ee aadanaha, gaar ahaan haddii adiga qaado qolka Synephrine iyada oo aan la xukumin. Dhinaca kale, isticmaalka synephrine maaha wax saameyn ah oo la mid ah, waxaana loo tixgeliyaa inay tahay mid ka badbaado leh marka loo eego eefedrine.
Isticmaalka qolka kaydka ee hadda jira
Waqtiga hadda, Synephrine iyo Waxyaabaha loo yaqaan 'supefrine' waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan oo ka mid ah iyaga oo ah hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka. Kiciyaha wuxuu kobciyaa habka loo yaqaan "thermogenesis" kaas oo dufanka dheeraadka ah ee jidhka la jebiyey si loo sameeyo murqaha.
Jidhku wuxuu ka jawaabayaa tan adoo hirgelinaya muuqaal si fiican loo dhisay. Kicinta ayaa sidoo kale ka caawisa dadka inay sii wadaan raashin caafimaad leh oo taageera dheef-shiid kiimikaad sax ah.
Sidee baa amaan u tahay Synephrine HCL Powder?
Nabdoonaanta budada ah ee loo yaqaan 'Synephrine HCL' lama hubin maaddaama ay tahay kiis kiciyaasha kale. Tani waa sababta oo ah daroogada ayaa si isdabajoog ah loo baarey waxaana la ogaaday in aysan aheyn wax halis ah gaar ahaan haddii uu isticmaalo qiyaasta ku haboon.
Natiijada ugu weyn ee la filayo ka dib marka la isticmaalo wax kasta oo kiciyeyaashu waa horumarinta cadaadiska dhiigga oo sarreeya kaas oo badanaa la socda heerka garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka Synephrine wuxuu keeni doonaa natiijooyin kala duwan. Tani waxay ka dhigeysaa doorasho ka duwan oo ka fiican daawooyinka muhiimka ah ee kor u kaca ah ee suuqa ku jira.
Si kastaba ha noqotee, daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan in isku-dar ah kafeegiin iyo xayawaanka HCL waxay u badan tahay in ay sababi karto saameyn xoog leh oo wadnaha ah. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaasha kale ayaa meesha ka saaray suurtogalnimada. Waxaynu ku arki doonnaa dooddaas halkan danbe.
FDA ma aysan soo saarin wax digniin ah oo ku saabsan isticmaalka Synephrine. Xaqiiqdii, dalalka qaarkood, isticmaalka synephrine ee meesha eefedrine waa mid aad loo dhiirri-galiyay. Tani waxay sabab u tahay welwelka ammaanka ee inta badan la kiciyo marka la isticmaalayo ephedrine oo ah kicin aad u awood badan. Tani waxay ka dhigeysaa mid macquul ah oo ku saabsan dhiig-kar kacsan iyo kordhinta garaaca wadnaha.
Raadi calaamado wanaagsan (5985-28-4) dib-u-eegis oo ka yimaada cayil
Synephrine adeegsiga budada HCL wuxuu soo saaray dib u eegisyo badan. Inkastoo ay jiraan waxyaabo taban, dadka badankood ayaa ku faraxsan waxa ay ku kordhineyso kaalmada ay gaartay gaar ahaan kuwa doonaya in ay lumiyaan dufanka xad-dhaafka ah. Qaar ka mid ah waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
James Shaw James Shaw waa 44-sano jir ah oo ku nool Liverpool, England. Waxa uu yidhi, "Muddo cayiman ayaan jirey waqtigaan, arrintuna waxay igu adkaysay wax badan gaar ahaan markii aan xasuusto jirkeena dhererka leh ee aan lahaa intii lagu jiray soddonkii hore. Waxaan sidoo kale la kulmay cadaadis dhiig oo sarreeya illaa shan sano oo hadda ah waxaana mar walba ka baqaya isticmaalka dheeraadka ah madaama dhibaatadeyda ay sii xumaan karto. " Yohimbine: Isticmaal + saameyn + Yohimbine oo iib ah
"Markii hore waxaan la siiyey qiyaasta 20mg maalin kasta, tanina waxay si tartiib tartiib ah u kordhay maaddaama uu dhakhtarku sii waday xaaladdayda. Nasiib wanaag, wax dil ah ma dhicin muddadaa jirkeedna jidhkeeyga wuu fiicnaaday illaa inta aanan fileynin. Maanta, waxaan si farxad leh u socon karaa iyada oo aan la dareemin wax ceeb ah oo ku saabsan muuqaalka jirka. Waxaan ku talin lahaa isticmaalka Synephrine qof kasta oo miisaan culus leh isagoo aan shaki ku jirin natiijada. "Ayuu raaciyay.
Katlego Muphulukuzi: Katlego Muphulukuzi waa 29-sano jir ka soo jeeda Koonfur Afrika. Kadib isticmaalka Synephrine, tani waa waxa uu u baahan yahay in la yidhaahdo, "Jacaylka aan u qabo qaansaradu aad ayay u yartahay waqtigii aan bilaabay isticmaalka dheecaanka" Synephrine ". Waxaan sidoo kale dareemayaa tamar badan intii aan horayba u jirin. Waxaan isku qoraa jimicsiga maxalliga ah, lix bilood gudahood, jirkeyga ayaa sidoo kale isbeddelay; Waxaan u egyahay qurux badan. "
Paul McLaughlin wuxuu ka shaqeeyaa farmashiyaha Chicago, Illinois: "Waxaan ahaa farmashiye tafaariiqeed muddo toddoba sano ah. Bilawga, waxaanu iibinay eefedrine, taasina waxay ka mid ahayd dawooyinka ugu dhaqsiyaha badan dukaanka. Muuqaalku si kastaba ha ahaatee ayaa isbeddelay markii guddiga xakamaynta maandooriyaha ee dawladu noogu yimaadaan si loo iibiyo walax la mamnuucay. Waa inaan iska dhigno ephedrine ka soo roogyada ama haddii kale farmashiyaha ayaa la xidhay. Taas ka dib, hubin la'aantu waxay u timid sidii uu u shaqeyn lahaa farmashiyaha iyada oo aan mid ka mid ah badeecooyinka ugu badan ee la cunay.
Wuxuu intaas ku daray, "Xilligan oo kale, ereyga ayaa ku wareegay in Synephrine uu ahaa wax cusub oo lagu beddelo efedrine. Marnaba shakhsi ahaan uma maleynin in wax waliba bedeli karaan Ephedrine laakiin dib u eegisii aan ka helay macaamiisha ayaa iga dhigtay nasasho aan ku fakaro. Dadku waxay u yimaadeen dalabaad dheeraad ah oo ku saabsan sicir-bararka. Waxyaabaha ugu yaabka badani waxay ahayd in xataa aan kuwa aan waligay u maleynin inay isticmaali karaan sida kicintaas oo kale. Qaarkood xittaa waxay la yimaadeen daawooyinka rijeetada si ay u iibsadaan kaalmada dheeraadka ah.
Soddigeennu waxay kordhay wax ka yar hal sano illaa iyo haatan, Seerafrine waa kan ugu badan ee iibsanaya farmashiyaha. Waxaan kugula talin lahaa qof kasta oo leh miisaan culus inuu isticmaalo daroogada. Ma sameyn doono si aan kor ugu qaado iibinteyda. Waa sababtoo ah waxaan soo arkay waxa mid ka mid ah oo u taagan inuu ka soo baxo isticmaalka dheeraadka ah. "Bawlos wuxuu hadda ku yaalaa Synephrine. "
Sharon: "Waxaan jeclaan lahaa inaan awoodi karo inaan soo diro sawiro ka hor iyo ka dib markii aan bilaabay inaan isticmaalo cinwaanka. Waxaan ugu dambeyntii ku guuleystey inaan helo qaab ciyaareedkeyga riyadeyda waana ku faraxsanahay. Waxaan kugula talin lahaa in loo yaqaan "Synephrine qofkasta oo raba in uu lumiyo miisaan la'aan".
Paul Luol Deng: Bawlos wuxuu yidhi, "Muddo adag ayaan ku haystay gaar ahaan dumarka doonaya in ay daadiyaan miisaanka qaarkood. Si ka duwan ragga, marwalba way diidaan in ay isticmaalaan steroids maxaa yeelay waxay ka baqayaan in ay saameyn karaan nidaamka taranka. "
Wuxuu intaa ku daray, "Waxaan isticmaali jiray muddo dheer, waxaanan si fiican u shaqeeyay. Maalin maalmaha ka mid ah, saaxiib ka socda Maraykanka ayaa booqday jimicsigayga waxaanan kula taliyay in aan isku dayo macaamiisha haweeneyda ah ee dheeri ah ee loo yaqaan 'Synephrine HCL supplement. Tani ma aysan u baahnayn mid aad u qancin madaama ay tahay mid dheeri ah, oo ka duwan astaanta steroids ee aan isku dayay in aan horay u soo galo. Macaamiisha yar ee ugu horreeya ayaa ku filan inay ku qanciyaan inta hartay ee ku saabsan wax ku oolnimada dheeraadka ah. Waxay u shaqaysay mucjisooyinka, waxayna miisaan culus saaraan maaddaama aan ku qiyaaso qadarkooda iyagoo leh kafeegiin yar si aad u dhaqso badan. Maalmahan, qof kastaa wuxuu rabaa in uu ka helo dheellitirka suugaanta xitaa ragga. "
Emily: "Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Phcoker oo loogu talagalay sadaqada" Synephrine supplements "oo ay ii soo direen laba bilood ka hor. Cunto-qabsigeyga ayaa hoos u dhacay waxaana bilaabay inaan la kulmo isbeddello muhiim ah oo jirkeena ah maaddaama miisaanka uu walwal qabo. Ilaa hadda aad u fiican. "
Vanessa Ford : Vanessa Ford wuxuu leeyahay, "Ma jirto wax dhiirrigelin ah oo ka wanaagsan kan Sephefine HCL. Marka ugu horeysa waxaan u maleynayay in ay ahayd kicis aan fiicnayn oo aanan i siinayn dareen ka fiican intii aan qaadanayey qaxwadayda. Si kastaba ha ahaatee, dareenka lixaad ayaa ii sheegay inaan tijaabiyo. Waxaan sameeyay iibsigeygii iigu horeeyay, ka dib markii bilawday qiyaasta, waxyaabaha ayaa bilaabay inay kala duwanaadaan. Dhamaanba waxaan ahaa mid xooggan oo ah in macallinkayaga jimicsiga uu ka tagay oo la yaabay meeshii dhiirigelin dheeraad ah ka timid. Waxaan sii waday in aan isticmaalo dhammaystirka ilaa taariikhda, iyo wax kasta oo aan dhihi karo waa in aysan jirin wax dhiirrigelin ah oo ka fiican kan Synephrine HCL. " Qoris miisaanka luntay: Sidee bay u qaadi kartaa dufanka degdegga ah?
Fredrick: "Waxaan ku guuleystey in aan daadiyo shan kiloowgii ugu dambeeyay sanadkeedii ugu dambeeyay, waxaana ugu mahadcelinayaa taageerada saxda ah ee Sacrifin. Anigu kuma mahadnaqi karo saaxiibkay ii soo bandhigay. Waxay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee gubashada gubanaya ee aan ogahay. "
Waa maxay qolofta(5985-28-4)?
Synephrine (5985-28-4) waa alkaloid oo caadi ahaan loo isticmaalo si loo sameeyo dheellitirka Synephrine HCL.
Synephrine waxaa badanaa laga soo qaataa miro orange ah oo qadhaadh leh oo aad u xoogga leh kiimikada. Si kastaba ha ahaatee, midhahaas ma aha ilaha keliya ee la og yahay ee alkaloid. Miraha kale ee liinta sida liin liin ayaa sidoo kale lagu ogaadey inay ku jirto budada Synephrine inkasta oo ay ku jiraan miisaan yar.
Synephrine waa gubo dufan wanaagsan iyo caawimo miisaanka oo yaraada. Waxay sidoo kale kordhin kartaa cadaadiska dhiigga, tani waxay noqon kartaa walaac dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha.
Mashruuca Nafaqada ee loo yaqaan 'ETAPRINE' ee budada HCL
Qaabka fayodhawrka ee qallooca ayaa sharraxaya saameynaha kala duwan ee dheeraadka ah ay ku badan tahay jirka. Waxyaabaha soo socda ayaa ah qaar ka mid ah saameynahan kuwaas oo jidhku ugu dambeyn dib u soo celiyo muuqaal ka duwan dhinaca hore ee jirka:
1. Saamaynta dheef-shiid kiimikaadka
Tani waa habka ugu muhiimsan ee ficilka kiimikada. Daroogadu waxay kordhinaysaa heerka kuleylka. Tan waxaa lagu sameeyaa beerka, iyo dhaliddu waxay badanaa kordhisaa tamarta jidhka taasoo ah rabitaanka ugu dambeysa ee ciyaaryahan kasta.
Tallaabada Synephrine waxaa lagu qabtay jiirarka, iyo waxyaalahan soo socda oo la mid ah waxa ka dhacaya bini-aadanka ayaa la arkay:
Waxaa jirey burburka kor u kaca ee gulukooska iyo glycogen. Kuwani waa ilaha muhiimka ah ee tamarta jirka. Sidaas daraadeed waa la filayaa in ay keenaan isbeddel cusub oo ku yimaada dhalidda tamarta.
Sonkorta ku jirta jiirka jiirarka looma beddelin dufanka. Dhibaato kasta oo jirka ah, helitaanka dufanka waa waxa ugu dambeeyey ee ay rabi lahaayeen. Halkii, qof kastaa wuxuu rabaa inuu gubo dufanka xad-dhaafka ah isla markaana u rogo murqaha.
Dib-u-celintaan waxay ku dhacdaa heer sare marka korontada la isticmaalo. Tani waxay ka dhigaysaa Saaxefrine qiimo waxtar leh oo ku filan waxqabadka cayaaraha.
Xaddiga ATP ee ku jirta beerka jiirarka ayaa si aad ah u kordhay. Beddelkani wuxuu faa'iido u yeelanayaa hagaajinta heerka saamiga kiimikada ee jirka ku yaal. Marka heerka ficilka la hagaajiyo, burburka dufanku wuxuu ku dhacaa heer ka dhakhso badan ka hor.
Glucose badan oo unugyada jirka jiirka ayaa la cunay. Tani waxay dhacdaa iyada oo la kicin karo AMPK enzyme kaas oo muhiim u ah caawinta gubashada dufanka jirka. Kordhinta AMPK ayaa sidoo kale keenta in sonkor badan lagu qaado unugyada jirka halkaas oo la jabiyo si loo sii daayo tamarta.
Tallaabada enzymes a-amylase iyo a-glucosidase ayaa la joojiyey. Kuwani waa enzymes kuwaas oo ka masuul ah dheefshiidka ee istaarijka adag ee jirka. Muhiimadda hannaankani waxa weeye in dhacdooyinka sonkorta dhiiga ka dambeysa dhiigga ka dib la joojiyo.
2. Dhibaatooyinka xasaasiga ah
Isticmaalka synephrine wuxuu kicin doonaa talaabada alpha 1 iyo alpha laba qaboojiyeyaasha adrenal, laakiin taasi waxay ku dhacdaa heer aad u hooseeya ficilka phenylephrine iyo ephedrine. Tani waxay ka dhigan tahay in fursada shakhsi ahaan la dareemo kororka garaaca wadnaha iyo sidoo kale cadaadis dhiig oo sarreeya ayaa aad u yaraaday.
Isticmaalka Synephrine wuxuu sidoo kale u horseedayaa kor u kaca firfircoonida neuromed-ka ee U2. Mammogelooyinkan waxay ku yaalaan hypothalamus ee maskaxda bini'aadamka waxayna mas'uul ka yihiin inay xakameyaan hurdada. Isticmaalka synephrine wuxuu kicin doonaa kuwa soo raraya ee keenaya hypothalamus si loo ogaado wacyigelinta muddo ka badan sidii caadiga ahayd
3. Dhibaatooyinka anti-bararka
Isticmaalka Synephrine ayaa hor istaagaya waxqabadka NF-kB. Maaddadani waxay fure u tahay in uu keeno xanuunka inflammatory sida neefta. Isticmaalka Synephrine ayaa sidoo kale lagu ogaadey inuu saameyn ku leeyahay ficilka hormoonka EOTaxin-1 inta badan. Tani waxay ka hortagtaa dhaqdhaqaaqa eosinophil oo ah aag lagu daboolo.
Inkasta oo aan si fiican loo xaqiijin iyada oo loo marayo tijaabooyinka, isticmaalka Synephrine ayaa la ogaaday in la joojiyo tallaabada acetylcholinesterase. Kiimikadaan waxaa loo yaqaanaa inay keento cudurka Alzheimers.
Gargaarka Caafimaadka ee Synephrine
Inkastoo dhammaan daawooyinka ay leeyihiin saamayntooda la og yahay, haddana waxay leeyihiin faa'iido marka la isticmaalo habboon. Synephrine waxaa loo isticmaalay sidii loo bedeli lahaa eefedrine. Tani waxay ahayd ka dib markii isticmaalka daroogada isticmaalka daroogada adduunka oo dhan ay mamnuucday isticmaalka daroogada dambe.
Walaac weyn ayaa laga qabay inay suurtagal tahay in la qabatimo maandooriyeyaasha oo u muuqda inay soo baxayaan ka dib isticmaalka ephedrine. Sidoo kale, eefedrine waa daawo aad u xoogan, waxaana la ogyahay inuu kicin karo dhiig karka. Sidaa daraadeed, synephrine waxaa loo isticmaali karaa sida loo bedeli karo eefedrine.
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah Waxtarrada Synephrine in mid ka mid ah loo qoondeeyay inuu gaaro ka dib isticmaalka habboon ee kiciyaha:
1. Maqnaanshaha Miisaanka
Tani waa arrin aad u muuqata oo dad badan oo efedrine ah ay rabeen in ay wax ka qabtaan marka ay qaadanayaan daroogada mamnuuca ah. Synephrine waa sida waxtar leh sida eefedrine oo lagu caawiyo luminta dufanka jirka ee xad-dhaafka ah. Tani waxay keeni doontaa miisaan lumis.
Daawada sidoo kale waxay u shaqeysaa si la mid ah iyada oo keenaysa horumarinta dheef-shiid kiimikaadka. Marka tani dhacdo, geedi socodka jirku wuxuu ku dhacaa heer deg deg ah, dufan badan ayaa la gubay.
Geedi socodka dufanka lakala qaado waxaa lagu gaarayaa lipolysis. Tani waxay ku lug leedahay saamaynta kuyeelayaasha ku jira unugyada dufanka. Tani waxay hubineysaa in dufanka burburku uu dhaco marka si ka dhakhso badan uu u dhaco haddii uu shakhsi ahaan u isticmaali karin kabitaan dheeraad ah.
Nidaamkan iyada oo dufanka xad-dhaafka ah la tirtiro iyo muruqyadiisa ayaa la soo saaraa waxaa loo yaqaan 'thermogenesis'. Waa geeddi-socodka dabiiciga ah ee dhacaya inkastoo heer aad u yar.
2. Dhimista cuntada
Dadka intooda ugu badan waxay yeelan doonaan rabitaan cunto ugu yaraan wax aan ahayn nafaqo-siinta waxtarka caafimaadkooda. Tan waxaa ka mid ah garbaha sida kiriimyada barafka, fries, iyo buskudka. Cuntooyinka noocan ah waa qodax jidhka ah gaar ahaan kuwa doonaya inay lumiyaan dufanka xad-dhaafka ah.
Tani waa sababta oo ah qaadashada qiyaasta "calorific" waxay go'aamisaa heerka khasaare baruurta. Marka qiyaaso badan oo calories ah la qaato, habka loo bedelayo murqaha halkii dufanka uu noqonayo mid aad u jilicsan jidhka.
Marka mid ka mid ah qaata Synephrine HCL, cun-cunka ayaa si weyn loo xakameynayaa. Tani waxay faa'iido u tahay in qofka xajistiisa loogu talagalay guntimaha la gashado. Qofku wuxuu hadda diiradda saari karaa qaadashada raashin caafimaad leh oo jidhka ah.
Sidaa daraadeed, isticmaalka Synephrine sida buuxinta xakameynta dufanka jirkaaga ee jirkaada ayaa ah waxa kaliya ee ugu fiicnaanta leh sida hubaal ah inaad ku guuleysaneysid tan tan oo dhan.
3. Miisaanka guluukooska murqaha leh oo wanaagsan
Isticmaalka synephrine wuxuu kor u qaadi doonaa koritaanka gulukooska jirka. Tani waxay ka dhacdaa laba siyaabood oo waaweyn. Glucose-ka xad-dhaafka ah ee dufanka dhiigga ku jira ayaa ah dhacdo dhici kara.
Isticmaalka Synephrine waxay hubin doontaa in sonkorta dhiigga ee dhiigga la tirtiro oo loo wareejiyo murqaha qalfoofka. Halkan glucose ayaa si fudud loogu beddeli karaa murqaha.
Marka labaad, Synephrine waxay hubin doontaa in sonkorta dhiiga u gudbiso muruqyada qalfoofka ay keento tamar kor u kaca marka sonkorku si deg deg ah u burburo. Tamarta Tani waxay muhiim u tahay samaynta geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaad oo awood u siinaya inuu qofku lumiyo dufanka xad-dhaafka ah.
4. Caawinta glycogenesis
Beerka waa unug jirka ah oo loo xilsaaray burburinta dufanka la keydiyo ee jirka. Isticmaalka Qaaxada (Synephrine) wuxuu saameyn ku yeeshaa beerka inuu keeno glycogenesis. Geedi socodkan muhiimka ah ee kale ayaa ku dhici doona heer aad u hooseeya. Waa maxay gawaarida HCL waa in la dhaqaajiyo habka lipolysis.
5. Waxay ka caawisaa kontoroolka sokorowga
Marka jirku uu u gaabiyo inuu gubo sonkorta dheeraadka ah ee jidhka ka dibna loo rogo qaab wax ku ool ah, fursadaha diabeteska ayaa kor u kacaya. Isticmaalka Synephrine wuxuu noqon karaa xal xaddidan oo ku saabsan dejinta heerka gulukooska jirka ee xadka loo oggol yahay. Marka la isticmaalo, dheeraadka ah ee ka soo baxa miro orange ah oo qadhaadh ayaa dhiirrigeliya burburinta sonkorta si loo sii daayo tamarta.
Shakhsiyaadka isticmaalay waxay tijaabiyeen heerarka sonkorta dhiigga oo hooseeya, tani waxay caddayn u tahay awoodda daroogada ee xakamaynta cudurka macaanka.
6. Dheefshiidka oo hagaagay
Shakhsiyaadka taageera adoo isticmaalaya Synephrine HCL waxay qabeen xaalado yar oo qallayl ah muddada isticmaalka. Sidoo kale, waxtarka daawada ee daroogada horay looma helin cilmi ahaan.
Si kastaba ha noqotee, sheegashadu waxay leedahay caddayn heer sare ah oo la siiyay in miro aad u qadhaadh oo ka soo jeeda Sefafiin inta badan laga soocay ayaa loo isticmaalay muddo dheer si loo xakameeyo calool-xanuunka.
7. Dareemida dareenka qalliinka ka hor
Isticmaalkan sidoo kale looma aqoonin cilmi ahaan run ahaantii shaki macquul ah. Si kastaba ha noqotee, shakhsiyaadka isticmaala Synephrine ka hor qaliinka qalliinka ayaa lagu ogaadey in uu qabo dareen yar. Daroogadu waxay u sahlaysaa qofka inuu yeesho dabeecad deggan oo gaar ah kahor intaan la helin qaliinka weyn.
8. Heerarka sare iyo heerarka tamarta
Isticmaalka Synephrine ayaa la ogaaday in ay keento isbedel weyn oo ku yimaada heerka niyadda iyo tamarta shakhsiyaadka. Sida laga soo xigtay daraasad la sameeyay, faa'iidada daroogada ayaa la cadeeyay. Mice waxaa loo geystay xaalado kala duwan si loo ogaado saameynta isticmaalka daroogada.
Tani waxay keentay isbeddel anshaxeed oo saameeyey xitaa caadooyinka quudinta. Muddo ka dib, jiirarka aan lahayn cadaadiska foosha-la'aanta ah ayaa lagu riday biyo waxayna keentay in lagu dabaasho kuwa la niyad jabay. Jiirka murugsan ayaa ahaa mid aad u jilicsan muddadan.
Kadibna waxay hoosta ku dhigeen Sefafiin iyo waxqabadkooda si wanaagsan ayey u fiicnaadeen. Si la mid ah, shakhsiyaadka isticmaala caawimada dheeraadka ah waxay u badan tahay inay jilicsan yihiin marka loo eego kuwa aan isticmaalin. Heerarka tamarta ee isticmaalaha taageerada 'Supefrine' ayaa la helay inay si aad ah u fiicneyd intii caadiga ahayd.
9. Xakameynta bakteeriyada waxyeellada leh
Dadka qaarkood waxay u isticmaalaan daawada sida antibiyootigga, waxayna cadeeyeen in ay caawinaad ka heleen ilaa xad. Tusaale ahaan, isticmaalka ayaa sababay hoos u dhigida heerarka bakteeriyada sida E. coli ee jirka. Si kastaba ha ahaatee waxtarka daroogada ee arrintan si kastaba ha ahaatee looma xaqiijin.
11. Maqaar yar
Dheeraadka ayaa si aad ah waxtar u leh si loo yareeyo suurtagalnimada caabuqa qaybta jirka ee dhaawacmay. Daawooyinka ayaa si weyn u yareynaya tirada unugyada caabuqa iyo cytokines. Tani waxaa soo raaca iyada oo la adeegsanaayo unugyada ka hortagga bararka ee unugyada saameeya.
Jiritaanka unugyada bararka leh waxay si toos ah u xawaaraan cudurada xasaasiyadda badan sida neefta. The isticmaalka Synephrine Qalabka gargaarka ah ee yareynta feejignaanta NF-kB ee waxyeello u leh waddankeeda firfircoon.
Daroogada ayaa shaki ku jiraa bedelka ugu fiican ee eefedrine maaddaama ay wax ka qaban doonto dhammaan meelaha kor ku xusan sida kicinta la mamnuucay. Waxa kale oo uu sidaas sameeyaa si nadiif ah iyada oo saameyntiisa dhinaca daawadu ay aad u yar tahay marka la barbardhigo ephedrine taas oo loo yaqaano inay keento cadaadis dhiig oo sareeya xitaa marka loo isticmaalo qiyaasta hoose.
Natiijada ugu fiican, waxaa lagula talinayaa in aad si toos ah uga fogaato inaad daawada ka iibsato kiimikada. Taa baddalkeeda, waa in uu booqdo dhakhtar caafimaad oo tayo leh oo bixin doona talada saxda ah ee ku saabsan sida loo isticmaalo daawada si badbaado leh una gaari karo waxa la doonayo.
Saameynaha Waxyeelada ee Saaxiibinta
Isticmaalka Synephrine waxaa sidoo kale weheliya saameynaha sida daawooyinka kale. Si kastaba ha noqotee, suurtagalnimada in la sheego waa mid ku xiran qiyaasta loo isticmaalo.
Saameyntu waxay sidoo kale u badan tahay inay noqoto mid aad u kacsan marka qofku labo labbo isticmaalo Synephrine oo la wadaagaya kafeyn. Waxyaabaha soo socda ayaa ah qaar ka mid ah saameynta daaweynta sunta ah ee HCL ee ay la kulmaan dadka isticmaala kaalmada dheeraadka ah:
Wax kicin lahayn ayaa loo tixgeliyaa inay tahay 100% ammaan ah oo keenaysa dhiig karka. Inkastoo suuxdinta loo arko inay tahay mid ka badbaado leh eefedrine ee horayba ah, haddana waxay xoojineysaa suurtogalnimada keenista dhiig kar.
Khatartu waa yar tahay. Waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso qaadashada dheeraadka ah haddii ay kugu dhaceen kiisaska dhiig karka.
Maaddaama ay jirto xaalad dhiig leh oo sarreeya, Seerefrine looma tixgelin karo inuu noqdo halis eefedrine oo keena cudurka wadnaha. Si kastaba ha noqotee, iyaga ayaa ah fursad ay ku xalin karaan ama kor u qaadi karaan gaar ahaan haddii loo isticmaalo kafeyn.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira dood ka socota suurtogalnimada suurtagalka ah in uu keeno ama uu ku dhaco cudur wadne, iyadoo daraasado muujinaya in aysan haysan wax saameyn ah wadnaha oo aan loo isticmaalin kaafeinka.
Saamilayaasha waxay ku shaqeeyaan iyadoo kordhinaysa heerka naqshadeynta jirka. Caadi ahaan, tan waxaa la socota kororka garaaca garaaca wadnaha sida wadnaha wuxuu ku dadaalaa inuu helo dhiigga ugu badan ee suurtogalka ah ee xubnaha jirka. Isticmaalka kiniiniga "Synephrine HCL" waxay u badan tahay inuu keeno kororka garaaca wadnaha inkastoo ay taasi dhacdo marar dhif ah.
Si kastaba ha noqotee, isticmaalka duufaan wadajir ah oo leh daroogo kale oo nooca caffeine ah waxay u badan tahay inay kor u qaaddo dhibaatada. Xaaladdan oo kale, wadnaha garaacu wuxuu xitaa noqon karaa mid aan caadi ahayn, tani waxay noqon kartaa mid dhimasho sababtoo ah waxay keeni kartaa dhimasho marka aan la qaban wax ku filan.
Dhimashada haddii loo isticmaalo qiyaasta sare ee qaliinka ka hor
Daawadan waxaa isticmaala dadka qaarkood si loo yareeyo kacsanaanta qalliinka ka hor. Saameyntan badanaaba waa la gaari karaa, laakiin waxa kaliya oo lagu kalsoon yahay oo ah heerarka hooseeya. Marka qadarku uu sarreeyo, isticmaalka Synephrine HCL ka hor qaliinka waxay u badan tahay inuu keeno cadaadis dhiig oo sarreeya ama xirmo wadnaha ah.
Tani waxay keeni kartaa geeri haddii arrimuhu soo baxaan qaliinka. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato Synephrine ama wax kale oo kiciya kicin ka hor qaliinka.
Xaaladaha qaarkood, dhakhtarku wuxuu qori karaa daroogada in la isticmaalo ka hor intaan qalliinku bilaabmin. Xaaladdan oo kale, waa in la sameeyaa iyadoo loo hoggaansamayo dardaaran dardaaran ah dardaaranka daawada ee aan loo baahnayn in uu ku dhaco dhibaato inta lagu jiro hawlgalka.
Isticmaalka qiyaasta sare ee "Synephrine" ayaa sidoo kale u muuqda inay sababi karto dhacdooyin, iyada oo tixgelinaysa in ay tahay kicin.
Waxyeellooyinka kale ee kale
Dadka isticmaala dheef-shiid kiimikaad hooseeya waxay la kulmaan dhibaatooyin kale. Si kastaba ha noqotee, darnaanta waxyeeladu way kala duwan tahay mid ka mid ah shakhsiyaadka kale tan oo waxay ku xiran tahay waxyaabo badan oo leh qiyaasta la isticmaalay waa furaha. Qaar ka mid ah saameynahan waxaa ka mid ah:
Sameynta xinjiro dhiig
Kalluumeysiga ayaa sidoo kale la soo sheegay. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay si gaar ah u dhacdaa dadka shilalka qaba kalyaha.
Xanuun xanuun. Calaamaddan waxaa laga yaabaa inay ku wareeraan xanuunka jirka oo sababay murugo muruq goorta tababarka tababarka.
Tani waxay dhici doontaa uun ka dib marka la isku daro ama la isku daro kiciya kale oo xoog leh.
Dhibaatooyinka dhinaca kor ku xusan waa inaysan waligood ku koobneyn hal qaadasho. Cilmi-baadhis ayaa muujisay in suurtagalnimada calaamadaha aadka u caansan ay aad u yartahay oo kaliya waxay dhici doontaa marka qiyaasta qiyaasta loo isticmaalo ee loo yaqaan "Memory Synephrine".
Waxaa jira macluumaad kooban oo ku saabsan saameynta daroogada ku saabsan hooyooyinka naas nuujinta iyo waliba kuwa sugaya. Sidaas daraadeed waa lagugula talinayaa in aad ka fogaato isticmaalka daroogada wakhtigaa sida mid aan dhici karin inuusan ogeyn waxa dhici doona isticmaalka ka dib.
Isticmaalka Qalabka loo Isticmaalay
Synephrine wuxuu ku jiraa waxyaabo badan oo jirka lagu dhajiyo ee qiyaas ahaan kala duwan oo ku xiran hadba sida soo saaraha. Qiyaasta daawada ugu badani waxay ku saabsan tahay 100mg maalintii. Tani waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qadar ku filan oo lagu gaaro miisaan lumis.
Inkastoo dadka badankood ay ku daboolaan kor ku xusan Qiyaasta qaliinka, badanaa waa xadka sare ee waxa loo tixgelinayo inay saameyn ku yeeshaan isticmaalaha. Qiyaasta sida hooseysa ku saabsan 30mg waa ku filan gaar ahaan kuwa bilowga ah.
Shakhsiyaadka isticmaalaya kabmadda si wadajir ah ula wadaagaya noocyo kale oo kiciyaasha, qiyaasta waa in lagu hayaa sida ugu hooseeysa ee suurtogalka ah ujeedooyinka udhaxeeya. Tani waa sababta oo ah isticmaalka Synephrine oo ay weheliso kiciyaha sida kaafeyntu waxay u saameeyn kartaa isticmaalaha isticmaalka dhiig kar iyo korodhka garaaca wadnaha. Inkastoo, sida hore loo soo sheegay, tani waa mowduuc oo weli dood ku jira.
Qadarka lagu taliyay in xitaa dadka isticmaala shardi waa in aysan dhaafin waa 200mg maalintii. Wax kasta oo ka sarreeya calaamaddan waxaa loo tixgeliyaa in uu sun yahay oo qofku halis ugu jiro in uu ku dhaco qulqulka waxyeelooyinka dhimashada ee la xidhiidha isticmaalka kiciyaha. Waxaa lagugula talinayaa, in laga bilaabo, 10 ilaa 20mg si loo hubiyo in Seerefrine uu si aan caadi ahayn uula dhaqmo jirkaada.
Kadib qaadashada qiyaasta bilowga ah, waa inaad qaadataa wakhti aad ku qiimeyso jawaabta jidhka ee dheeraadka ah. Haddii ay dhammaantoodu fiican tahay, qiyaasta labaad ee ku saabsan 20mg ayaa lagu dari karaa laba saacadood ka dib.
Qalabka qiyaasta ugu haboon wuxuu qaadanayaa daawada hal mar labadii saacadoodba mar. Si kastaba ha ahaatee, waa in lagula taliyaa in la iska ilaaliyo qaadashada daroogada ilaa afar saacadood ka hor hurdada. Caawimada dheeraadka ah waxay inta badan qaadataa laba saacadood si ay u noqoto mid wax ku ool ah jirka.
Sidaa darteed, qaadashada Synephrine sida aad ugu dhowaato hurdadaada waxay u badan tahay in ay dhex gasho jidhkaaga. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad seexato.
Qaadashada daawada saxda ah ee saxda ah ee miisaanka lumitaanka
Mowduucyada ugu muhiimsan ee doodaha: Synephrine vs Caffeine
Ma isku mid ah maacuunta / kaafeyntu?
Marka la wada baabbi'iyo, Synephrine wuxuu kobciyaa dheef-shiid kiimikaad, halka kaffeine-ka uu ka dhigayo mid si toos ah u soo jeedo. Waxyaabaha dheeraadka ah waxa ku jira caffeine iyo Synephrine maaddaama ay ka kooban tahay maaddooyinka ay bixiyaan labada waxtarka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira doodo socota oo ku saabsan Synephrine vs Caffeine; isticmaalka Synephrine iyo caffeine. Daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan in isku dhafka labadaba ay ku dhammaan karaan sameynta daroogada oo la mid ah eefedrine, iyo saameynta daawooyinkaan la xidhiidha daawadan ayaa sidoo kale khibrad u leh natiijada isku dhafka.
Qiimeynta caafimaadka ee dhowaan laga soo saaray Finland iyo Jarmalka ayaa tilmaamaya in isku-darka Sefthefin iyo caffeine ay u badan tahay in ay kordhiso saameynta ay suurtagal ka tahay dhiig karka iyo garaaca wadnaha. Qoraalkan, qaar ka mid ah hey'adaha dowliga ah ee Yurub ayaa amar ku bixiyay in la soo saaro waxyaabo dheeri ah oo ka mid ah labadii siyaabood ee laga soo iibsaday suuqyada sababtoo ah cabashooyinka ammaanka caafimaadka.
Dhinaca kale, daraasadaha qaarkood, tusaale ahaan BfR Opinion No. 004 / 2013 oo cinwaankeedu yahay "Qiimaynta Caafimaad ee Ciyaaraha Isboortiga iyo Miisaanka Khashkhashka Leh ee ku jira Saaxefrine iyo Caffeine", waxay ogaadeen in Seerfrini uusan haysan wax saameyn ah wadnaha iyo xididada haddii kali loo isticmaalo ama la isku daro kafeyn.
Ma samefrine iyo caffeine ma bixiyaan faa'iidooyin isku mid ah?
Sidoo kale, waxaa jira qayb ka mid ah dadka rumaysan in Synephrine iyo caffeine ay bixiyaan faa'iidooyin isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la ogaado in inkastoo labadaba yihiin kiciyeyaasha, shaqadoodu way kala duwan yihiin sidoo kale waa saameyntooda.
Caffeine waxay saameysaa nidaamka dhexe ee neerfaha, habka dheef-shiidka iyo nidaamka wareegga. Natiijooyinka isticmaalka kaafeyntu waxaa ka mid ah feejignaan, wacyi-galin iyo dhiirrigelin niyadda. Dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah jitters, madax xanuun, walwal iyo walbahaar.
Dhinaca kale, Synephrine waxay badi saameyn ku yeelataa dheef-shiid kiimikaadeedkaaga, taasoo keentay kororka dheef-shiid kiimikaadka, kharashka tamarta iyo awoodda.
Sidaa darteed, Synephrine iyo caffeine waa laba kiciyaal oo kala duwan oo leh saameyn kala duwan.
Iibsiga Supephrine Supplement Online
Ma u baahan tahay supefrine supplement? Warka wanaagsani waa adiga iibso Synephrine online, iyo dhinaca kale, nasiib daro, waxaa jira waxyaabo aan qiimo lahayn oo lagu iibiyo internetka oo laga yaabo inaad si fudud uga takhalusin kuwa dhabta ah.
Sidan oo kale, waa muhiim in aad iibsato Synephrine supplement ka iibsasho iibsan online, qaali ah Phcoker.com.
Waa kuwan talaabooyinka fudud ee aad raaci doonto si aad u iibsato Synephrine ka timaada Phcoker.com:
Tag bogga internetka ee Phcoker.com
Buuxi foomka codsiga iibsiga si sax ah oo soo gudbiya
Haddii lagaa rabo in aad buuxiso su'aal caafimaad oo gaaban, samee oo soo gudbiso. Khabiirka takhasuska ee Phcoker wuxuu isticmaali doonaa foomka buuxa si loo ogaado haddii uu ogolaado amarkaaga.
Lacag bixinta amarka marka la ansixiyo.
Sug sugnaashaha in laguu geeyo (haddii aan ka badnayn saddex maalmood haddii aad ku sugan tahay Mareykanka)
Waxaad arkeysaa sida ugu sahlan ee loo iibsado Synephrine online?
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanad iibsan kaalmada dheeraadka ah, waxaa lagugula talinayaa in aad la tashatid khabiir daryeel caafimaad wixii talo ah ee ku saabsan qiyaasta saxda ah ee loo isticmaalo iyo go'aaminta haddii kiciyaha uu kugu habboon yahay. Khabiirka takhasuska ayaa kugula talin doona qiyaasta ku habboon in la qaado iyo suurtogalnimada in lagu soo saaro saameyno kale haddii aad qaadato kabitaanka.
Gunaanad on Synephrine (5985-28-4)
Qodobada nafaqada, Seerafrine waxay calaamadisaa dhammaan sanduuqyada waxtar dheeraad ah oo loogu talagalay isticmaalka miisaanka. Waxay leedahay waxyeelo aad u fudud, taasina waxay ka dhigeysaa midka ugu fiican ee loogu talagalay cayaaraha kasta oo doonaya in uu hagaajiyo heerkooda tamarta inta lagu jiro fadhiga tababarka. Waxa ay si ba'an u bedeshay efedrine oo aad u sareysa oo lagu beddelay mid kale oo ka sii wanaagsan oo lagu heli karo hal heer sare iyada oo aan halis u ahayn inuu yeesho cadaadis dhiig oo sarreeya.
Akhlaghi, M., Shabanian, G., Rafieian-Kopaei, M., Parvin, N., Saadat, M., iyo Akhlaghi, M. Citrus aurantium ubaxa iyo walaaca preoperative. Rev Bras.Anestesiol. 2011; 61 (6): 702-712.
Bent, S., Padula, A., iyo Neuhaus, J. Badbaadada iyo waxtarka aaladda liinta ee murgacashada miisaanka. Am.J.Cardiol. 11-15-2004; 94 (10): 1359-1361
Campbell-Tofte, JI, Molgaard, P., Josefsen, K., Abdallah, Z., Hansen, SH, Cornett, C., Mu, H., Richter, EA, Petersen, HW, Norregaard, JC, iyo Winther, K. Daraasad kiliin ah oo laba-indho-indho-indho-indheeye ah oo ku saabsan waxtarka nabadgelyada iyo ka-hor-imaadka macaanka ee Rauvolfia-Citrus, sida lagu isticmaalo daawada dhaqameed ee Nijeryaanka. J ootofarmacol. 1-27-2011; 133 (2): 402-411.
R. Costa, MBA Glória, oo ku jirta Ansixinta Daraasaadka Cuntada iyo Nafaqada (Wargeyska Labaad), 2003
Ghanim H, Sai CL, Upadhyay M. et al. Casiir ama orange ayaa nuujineysa saameynta proinflammatory ee cuntada dufanka sare, carbohydrate-ka iyo waxay ka hortagtaa kordhinta endotoxin iyo muujinta qaabka loo yaqaan 'toll-like reseptor'. Amer J Clin Nutr. 2010, 91: 940-949
Stohs SJ. Qiimaynta warbixinnada xaaladaha xun ee la xiriira Citrus aurantium(orange bitter) laga bilaabo Abriil 2004 illaa Oktoobar 2009.
Dragull K, Breksa AP, Cain B. Synephrine ee cabitaanka casiirka mansabka Satsuma (Citrus unshiuMarcovitch). J. Agric.Food Chem. 2008, 56: 8874-8878
Roman MC, Betz JM, Hildreth J. Go'aaminta synephrine ee qalabka cagaaran qorraxda, dabeecadaha, iyo dheellitirka cuntada oo laga helo kromatografi dareer leh ogaanshaha ultraviolet: hal shaybaarka oo keliya. J Amer Org Anal Chemists Int. 2007, 90: 68-81
Mercolini L, Mandrioli R, Trere T. et al. Falanqaynta cabbirka CE-ga ee aminjirrada adrenergic ee qaybo kala duwan Citrus aurantiummiro iyo cunto dheellitiran. J Sep Sci. 2010, 32: 1-8
Haaz S, Fontaine KR, Cutter G, Limdi N. et al. Citrus aurantiumiyo alkaloids synephrine ee daaweynta ee cayilka iyo cayilka: update ah. Obesity Rev. 2006, 7: 79-88
Higgins, JP, Tuttle, TD, iyo Higgins, Cabitaanada tamarta ee CL: Nafaqada iyo amniga. Mayo Clin Proc. 2010; 85 (11): 1033-1041.
Kaats, GR, Miller, H., Preuss, HG, iyo Stohs, SJ A-60day laba-indhoole, daraasad nabadgelyo oo la xakameynayo oo la xidhiidha citrus aurantium (orange bitter). Chem Food Toxicol. 2013; 55: 358-362.
Lynch B. Dib u eegista amniga p-synephrine iyo kafeyn. Intertek-Cantox Report, 2013; 1-20.
Qiimeynta caafimaadka ee isboortiga iyo alaabta lumay oo ay ku jiraan maqefrine iyo kafeyn Bfropinion No. 004 / 2013, ee 16 November 2012